အဆိုပါ Visual သင်ယူစတိုင်
သင်ကားသော့ left ဘယ်မှာ၏အတိအကျတည်နေရာကြဖို့အရေးကြီးနေသည်မှသင်၏မျက်စိပိတ်တဲ့သူတွေကိုလူတွေတဦးဖြစ်ပါသလား သင်နောက်ဆုံးအင်္ဂါနေ့မွန်းလွဲပိုင်းဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာမှတ်မိဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အခါသင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား သင်အစဉ်အဆက်ကိုဖတ်ပြီးပြီတိုင်းစာအုပ်၏အဖုံးကိုမှတ်မိပါသလား သင်တစ်ဦးဓာတ်ပုံပြပွဲသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံပြပွဲမှတ်ဉာဏ်အနီးရှိပါသလား ထို့နောကျဆကျလကျသငျအမြင်အာရုံသင်ယူမှုစတိုင်နှင့်အတူထိုလူတဦးတည်းဖြစ်၏။ ယင်းအမြင်အာရုံသင်ယူမှုစတိုင်ကဘာလဲ?
Visual သင်ယူ၏တစ်ခုဖြစ်သည် သုံးခုကွဲပြားခြားနားသောသင်ယူမှုစတိုင်များ သင်ယူမှုသူ၏ VAK မော်ဒယ်အတွက် Neil ဃ Fleming ကအားဖြင့်ခေတ်စားလာခဲ့သည်။ အခြေခံအားဖြင့်, အမြင်အာရုံသင်ယူမှုစတိုင်လူများကသင်ယူဖို့အချက်အလက်တွေကိုမြင်တွေ့ရန်လိုအပ်သည်ဟုဆိုလိုသည်, ဤ Spatial အသိအမြင်, ဓာတ်ပုံပြပွဲမှတ်ဉာဏ်, အရောင် / သေံ, အရောင်အဝါ / contrast နဲ့အခြားအအမြင်အာရုံသတင်းအချက်အလက်ထံမှပုံစံအမျိုးမျိုးကြာ "ကိုမြင်လျှင်" ။ သဘာဝကျကျတစ်ဦးစာသင်ခန်းသင်ယူဖို့တစ်အမြင်အာရုံသင်ယူသူများအတွက်အလွန်ကောင်းသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဆရာများအသိပညာသို့အမြင်အာရုံသင်ယူသူသွေးဆောင်ဖို့ overhead, အ chalkboard, ပုံများ, ဂရပ်များ, မြေပုံများနှင့်အခြားသောအမြင်အာရုံပစ္စည်းများကိုသုံးပါ။ ဤသူသည်သင်တို့ကိုပုံမှန်အားဖြင့်သင်ယူလမ်းဖြစ်၏လျှင်ဤသူသည်သင်တို့အဘို့ကြီးသောသတင်းပါ!
Visual သင်ယူသူပုံမှန်အားဖြင့်ခေတ်မီစာသင်ခန်း setting ကိုတကယ်ကောင်းကောင်းလုပ်ပါ။ အဖြူပျဉ်ပြား, ကမ်း, ဓာတ်ပုံများနှင့်ပိုပြီး - ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, စာသင်ခန်းထဲမှာပဲဤမျှလောက်များစွာသောပုံရိပ်ယောင်ရှိပါတယ်! ဤရွေ့ကားကျောင်းသားများကိုကျောင်းမှ၎င်းတို့၏ဖျော်ဖြေပွဲမြှင့်တင်ရန်နိုငျသောများစွာသောအားသာချက်များရှိသည်။
ချိန်ခွင်လျှာနှင့် alignment ကိုများစွာသောအသိရှိပါတယ်
အရောင်တစ်ခိုင်မာတဲ့အသိရှိပါတယ်, ပြီးအလွန်အရောင်-oriented ဖြစ်ပါသည်
ကျောင်းသားများအဘို့အ Visual သင်ယူမဟာဗျူဟာ
သင်တစ်ဦးအမြင်အာရုံသင်ယူသူဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အကယ်. သင်ဤလွယ်ကူသော, ဆယ်မေးခွန်းတစ်ခုကိုပဟေဠိတွေနဲ့လျှင်သင်ဒီမှာထွက်ရှာတှေ့နိုငျလြှငျ, သငျသညျအတနျး၌ထိုင်သို့မဟုတ်တစ်စမ်းသပ်မှုများအတွက်လေ့လာနေသည့်အခါဤအရာတို့ကိုအထောကျအကူရှာတွေ့လိမ့်မည်။ Visual သင်ယူသူဟာသူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာသူတို့ကိုသဘောတူညီချက်ခိုင်မာအောင်ကူညီပေးဖို့သူတို့ရှေ့မှာအမှုအရာလိုအပ်တယ်, ဒါပို့ချချက်ကိုနားထောင်သို့မဟုတ်တဲ့အခါမှာတစ်ဦးတည်းကသွားကြဖို့မကြိုးစားဘူး သင်၏နောက်လယ်များအတွက်လေ့လာနေ !
အရောင်ကုဒ်သင့်ရဲ့မှတ်စုများ, ဝေါဟာရစကားလုံးများ, ကျောင်းစာအုပ်
တစ်ဦးအစီအစဉ်အတွက် To-do list များ Make
အထီးထီးနေခြင်းအတွက်လေ့လာမှု။ သူတို့ကိုသင်မှတ်မိဖို့အမှုတို့ကိုမြင်ဖို့လိုတယ်, မကြာခဏ, ဆူညံသံသငျသညျအာရုံပါလိမ့်မယ်။
ဆရာများအဘို့အ Visual သင်ယူမဟာဗျူဟာ
ယင်းအမြင်အာရုံသင်ယူမှုစတိုင်နှင့်သင်၏ကျောင်းသားများကိုသင့်ရဲ့လူတန်းစားများ၏ 65 ရာခိုင်နှုန်းခန့်တက်ပါစေ။ ဤရွေ့ကားကျောင်းသားများသူများဖြစ်ကြ၏ ရိုးရာစာသင်ခန်း သင်ပေးဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ သူတို့ကသင့်ရဲ့ overhead ဆလိုက်, အဖြူရောင်ဘုတ်, စမတ်ဘုတ်, PowerPoint တင်ပြချက်များ, ကမ်း, ဂရပ်များနှင့်ဇယားအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦးလက်ကမ်းစာစောင်, ပုံ, သို့မဟုတ်အခြားပုံရိပ်ယောင်များနှင့်အတူနှုတ်ပို့ချချက်ဖြည့်စွက်
သင့်ရဲ့သင်ကြားပို့ချမှုနည်းလမ်းများ (ပို့ချချက်, အုပ်စုတစုအလုပ်, တိုက်ပိတ်အလုပ်, အားလုံး, စက်ဝိုင်း) နှင့်တာဝန်ကျဒါတိုင်းသင်ယူသူစိန်ခေါ်နေသည်ကွဲပြား
ငါ MCAT နေရာထိုင်ခင်းအဘို့အခငျြးမီပါသလား
High School တွင်သင်္ချာကိုလေ့လာ5Website များ
ထိပ်တန်းစီးပွားရေးကျောင်းများအဘို့အ GMAT ရမှတ်များ
ပိုက် Down မှပြည်သူ့ Get4သည့်နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းများ
ပင်မ Idea သင်ထောက်ကူစာရွက် 1 အဖြေများ
High School တွင်အတွက် သာ. ကောင်း၏ရေးထား 14 နည်းလမ်းများ
အက်တမ်နှင့်အနုမြူသီအိုရီ - လေ့လာမှုလမ်းညွှန်
အနီရောင် Giants: အလမ်းထဲကပေါ်ကြယ်
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်: စစ်ဆင်ရေး Dragoon
La Cenerentola ဇာတ်လမ်းအကျဥ်း
ပြင်သစ်နှိုငျးမဲ့ Adverb - Adverb Superlatifs
Gerunds သို့မဟုတ် Infinite လိုက်ကြိယာများစာရင်း
အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ကြီး: Chancellorsville ၏တိုက်ပွဲ
ရှုခင်းပန်းချီနှင့် Drawing အကြံပြုချက်များ
သင့်ရဲ့သတင်းပုံပြင်၏ Lede မြှုပ်ရှောင်ကြဉ်ဖို့ကိုဘယ်လို
Monte Cristo များ၏အရေအတွက်
အဘယ်အရာကိုကြိယာ Are နှင့်မည်သို့သူတို့ဟာစပိန်အတွက်အသုံးပြုနေပါသလား
စစ်အေးတိုက်ပွဲ: သင်္ဘော USS ဆိုင်းပန် (CVL-48)
1960 Batman Theme Song ကဖုံးအုပ်ဒါက 8 တေးဂီတအဖွဲ့များ
ထိပ်တန်း 15 အကောင်းဆုံးကျေးလက်ခရစ္စမတ်အယ်လ်ဘန်
တစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ် (သင်္ကေတ) ကဘာလဲ?
Pousser - Push ကိုမှ
Case Western Reserve GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ